12 a.m လား 12 p.m လား? - Myanmar Network
Posted by zar ni (My Way!) on July 3, 2011 at 15:03 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာကာစ တစ်ချို့တွေ ၀ိုးတ၀ါးဖြစ်နေသေးတဲ့အရာတစ်ခုကတော့ ည ၁၂ နာရီဟာ 12 a.m. လား p.m. လားဆိုတာပါပဲ။ a.m. ဆိုတာ လက်တင်ဘာသာ ante meridiem ရဲ့အတိုကောက်ဖြစ်ပြီး မွန်းတည့်မတိုင်မီအချိန် (before noon) လို့အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ p.m. ကတော့ post meridiem မွန်းတည့်ပြီးနောက်ပိုင်းအချိန် (after noon)လို့ဆိုလိုပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့် 12-hour clock system သုံးတဲ့အခါမှာ 12 a.m. သည် ညသန်းခေါင်ချိန်ဖြစ်ပြီးတော့ 12 p.m. သည် မွန်းတည့်ချိန်ကို ရည်ညွှန်းပါတယ်။ တစ်ချို့ ကပ်ကပ်သပ်သပ် ငြင်းချင်သူတွေကတော့ ည ၁၂ နာရီတိတိသည် before noon အဓိပ္ပါယ်အရ a.m. မဖြစ်သင့်ဘဲ p.m. သာဖြစ်သင့်တယ်။ ၁၂.၀၁ နာရီသာလျှင် a.m. ဖြစ်သင့်တယ်လို့ အထွန့်တက်ကြပြန်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ အင်္ဂလိပ်စကားကို မိခင်ဘာသာ အနေနဲ့ပြော သူတွေ ရေးသလို၊ ပြောသလို လိုက်ပြောရမှာပါပဲ။ U.S. Government Printing Office နဲ့ ဒီဂျစ်တယ်နာရီတွေကတော့ 12 a.m. ညသန်းခေါင်၊ 12 p.m. ကို နေ့မွန်းတည့်ချိန်အဖြစ်သတ်မှတ် အသုံးပြုပါတယ်တဲ့။ အင်္ဂလိပ်စာသင်ရိုးစာအုပ်တွေမှာလည်း ဒီလိုပဲသုံးတာတွေ့ရပါတယ်။ Canadian Press, UK standard, National Institute of Standards and Technology တို့ကတော့ ရှုပ်ထွေးမှုမဖြစ်အောင် midnight, noon ဆိုတဲ့ စကားလုံးကိုပဲသုံးတယ်လို့ သိရပါတယ်။ တကယ်တော့ လူ့ဘ၀ဆိုတာ အများစုသတ်မှတ်ပေးကြတဲ့ convention အစဉ်အလာတွေ အတိုင်း လိုက်နာနေထိုင်ကြရတာပဲမဟုတ်လား။ ကိုယ်က Shakespeare လိုဖောက်ထွက်နိုင်ရင်တော့လည်း လူတွေ ကိုယ်ပြောသလိုရေးသလို လိုက်လာကြမလားဟု ထင်မိပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားရင်တော့ အောက်ကလင့်ကလေးတွေမှာ အကျယ်ဖတ်ကြည့်ကြတာပေါ့။
Permalink Reply by Thura Aung on July 3, 2011 at 16:10
Great message, most of people use like 12 :00 pm but sometime it is so confusable. Thank you.
Permalink Reply by Rajani kant on July 4, 2011 at 9:28
Permalink Reply by MIN ZIN OO on July 4, 2011 at 9:34
I think 'Noon' and 'Midnight' are more appropriate words since 12 o' clock (either day or night) is the reference point with which 'a.m.' and 'p.m.' are defined. Given that point, it in fact doesn't belong to either 'a.m.' or 'p.m.'.
Permalink Reply by Nilar Win on July 4, 2011 at 9:36
Midnight ဒါမှမဟုတ် Noon လို့ပဲသုံးလိုက်တာ နားအေးမယ်ထင်ပါရဲ့... ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်..ခုလိုပြောပြတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်..
Permalink Reply by zwe on July 5, 2011 at 8:26
Permalink Reply by 0jhlgxon1ll23 on July 4, 2011 at 9:51
Almost confuse like that. Me too. Now clear with thks.
Permalink Reply by Taang Sianpu on July 4, 2011 at 9:57
If there isachoice it would be wise to use Noon/ Midday or Midnight in place of the AMs and PMs but by some reasons one needs to use the abbreviation then it would be good to write/ use this. This will lessens confusion as well. Or does it make more confusion :)
Permalink Reply by seth.saw on July 4, 2011 at 10:00
Permalink Reply by 2d0zs7h4pqxyx on July 4, 2011 at 10:07
မနက်ပိုင်းကနေ ကူးပြောင်းတဲ့အခါ 12:00 noon လို့ မှတ်သားဘူးပါတယ်၊၊ မိနစ်၊ စက္ကန့် နည်းနည်းကျော်သွားတာနဲ့12:01 p.m ဖြစ်သွားတယ်လို့ မှတ်သားဘူးပါတယ်၊၊
Permalink Reply by u myo aung on July 4, 2011 at 11:10
အသုံးအနှုန်းဆိုတာရှင်းလေ ကောင်းလေမို့ - အရှင်းဆုံးဟာအကောင်းဆုံးလို့ယဆပါတယ်
Star MemberPermalink Reply by zar ni (My Way!) on July 4, 2011 at 11:52
Permalink Reply by starfire on July 4, 2011 at 10:10